Zanu-PF Inoti SADC Haisi Kutevedzera Zvakatenderanwa muMusangano Wayo paNyaya yeZimbabwe
Nyamavhuvhu 23, 2011
Bato reZanu-PF rave kuronga kusvitsa kuSADC zviri pamutemo chichemo charo richiti harisi kuzotambira chisungo chemusangano wesadc chekuti troika itumire nhumwa kuzoshanda nenhumwa dzamutongi gava panyaya yezimbabwe, VaJacob Zuma, pamwe neJOMIC.
Zanu-PF inoti pakaitwa chisungo ichi, mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vainge vatokwira ndege vadzokera kumusha. Zanu-PF inoti payakabva nyaya iyi yainge yasendekwa parutivi.
Vari kutungamira Zanu-PF munhaurirano, VaPatrick Chinamasa, naVaNicholas Goche, vatoudzwa nebato ravo kuti vataure naVaZuma neSADC kuti Zanu-PF haisi kuzotenderana nechisungo cheSADC ichi. VaMugabe nechikwata chavo chevanhu vaipfuura makumi mana vakakurumidza kubva kumusangano wekuLuanda, ichi chava chigariro chaVaMugabe kubva kumisangano isati yapera zvikuru kana kuchinge kuchitaurwa zvinhu zvavasingawirirane nazvo.
Vatungamiri vakawanda muSADC vanenge vave kuneta nenyaya yeZimbabwe. Mutungamiri weAngola, VaEduardo dos Santos, avo vave sachigaro weSADC uye vari sahwira waVaMugabe, vakataurawo kuti havasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe, RDC neSwaziland, vachiti vatungamiri venyika idzi, vanofanira kuita zvido zvevanhu.
VaZuma vakataurawo kumusangno uyu kuti vanhu vave kuneta nenyaya yeZimbabwe. Vatungamiri veSADC vakabva vapawo vazuma masimba akawanda ekuti vapedzise dambudziko reZimbabwe iri.
Mutauriri weZanu-PF VaRugare Gumbo vanoti SADC haifanire kuda kuudza Zimbabwe zvekuita . Asi VaDewa Mavhinga vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re Rrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kwe Africa vanoti Zanu-PF iri kuda kungovhiringidza hurongwa hwekugadzirisa zvinhu.